Velan-kevitry ny CREM teny amin'ny Antenimierandoholona
Velan-kevitry ny CREM teny amin’ny Antenimierandoholona
Nanatanteraka famelabelaran-kevitra narahina adihevitra teto amin’ny Antenimierandoholona ireo solontenan’ny Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar (CREM) eto Madagasikara androany Alarobia 13 may 2020. Famelabelaran-kevitra niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ireo paikady entina hanarenana ny toekarena eto Madagasikara aorian’izao krizy ara-pahasalamana izao.
Nambaran’Andriamatoa Profesora RAKOTO David Olive Niaina mpikambana ao amin’ny CREM, nandritra ny famelabelarana izay noentina, fa mba hiadiana amin’ny fahantrana sy mba hampihenana ny tahan’ny fahantrana eto amin’ny firenena, izay miankina be indrindra amin’ny lafiny ara-bola, dia tokony hampitomboina ny famokarana mba hampitombo ny tahan’ny fanjifana ka hampiakatra ny vola miditra eo amin’ny fanjakana. Ilaina ihany koa hoy izy ny famoronana vola mba hirosoana any amin’ny fahaleovantena ara-bola ka hahafahana mampandroso tsara ny firenena. Nohamafisiny ihany koa fa misedra olana lehibe tokoa ireo sehatra manara-dalàna ankehitriny amin’izao krizy ara-pahasalamana hatrehany firenena izao, kanefa izy ireo no fototrin’ny fampandrosoana sy famokarana ka tokony hojeren’ny fanjakana akaiky. Tokony hotsinjovina ihany koa ireo sehatra tsy miankina izay tsy ara-dalàna izay efa manenika ny 70 % ny mpandraharaha Malagasy misehatra anatin’io ka atao izay hirosoan’izy ireo amin’ny sehatra ara-dalàna amin’ny alalan’ny fanenanana ny tahan’ny haba izay takiana amin’izy ireo mba hitomboan’ ny vola miditra amin’ny fanjakana izay mitarika any amin’ny fampandrosoana.
Nohamafisin’izy ireo ihany koa ny fananganana « Banque d’Etat » na koa « Banque de développement » izay atao hisahana ireo fotodrafitrasa lehibe eto amin’ny firenena ka atao ambany ny tahan’ny « taux d’intérêt » alaina amin’izany sy tokony hojerena ihany koa ny texte mahakasika ny lalàna mifehy ny banky.
Nanome fanazavana mahakasika fandraharahana ny resaka « pétrole » eto amin’ny firenena ihany ko aizy ireo izay mila hampiakarina ny « capacité de stockage », ny famerenana ny raffinerie , ny fanjifana mivantana amin’ireo mpamokatra fa tsy mifampiraharaha intsony amin’ ireo mpanelanela mba hahazahoana vidiny ambiny amin’ny solika ary indrindra ny fandraisan’ny fanjakana andraikitra amin’ny fampiraharahana mahakasika ny vidy sy ny kalitao .
Niroso tamin’ny fametrahana fanontaniana sy nandroso soso-kevitra hanarenana ny toe-karena eto Madagasikara moa ny Loholona amin’ny maha matianina ny ankamaroan’izy ireo amin’ity lafiny ara-toekarena ity.
Nanambara ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fa zava-dehibe hoan’ny firenena tokoa ny manana olona manana traikefa amin’ny lafiny hay ara-toekarena toy izao, izay tsy mitsahatra mikaroka ny tombotsoan’ny firenena. Samy mitsinjo izay mety hahasoa ny firenena ny tsirairay ankehitriny indrindra amin’izao krizy maneran-tany izao ka samy mijery ny paika rehetra hoentiny hanarenana ny tanjaka ara-toekarenany. Tokony ho sahy ihany koa hoy izy ny fitondram-panjakana hiroso amin’ny fitrosana lehibe kokoa entina hampiakarana ny harin-karena fa mitaky paikady mazava tsara anefa izany .
Ny Filohan’ny Antenimierandoholona moa dia nankasitraka azy ireo tamin’ny fandalovany teto amin’ny Antenimierandoholona. Izao no natao hoy izy mba ahafahan’ny Loholon’i Madagasikara mahafantatra bebe kokoa momba ny toekarena eto Madagasikara, mba ahafahan’izy ireo mampitombo ny traikefa izay efa ananany ary mba ahafahana maneho hevitra amin’ny fandinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana taona 2020 nasiana fanovàna izay handalo eo anivon’ny parlemanta roa tonta. kanefa na dia eo aza izany dia tsy maintsy miainga amin’ny finiavan’ny mpitondra hoy izy no ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana ny firenena.